Ai No Kusabi | Peace site
May 31, 2021 peacesite7410	Leaveacomment
Ai no Kusabi isaJapanese novel written by Rieko Yoshihara. Originally serialized in the yaoi magazine Shousetsu June between December 1986 and October 1987, the story was collected intoahardbound novel that was released in Japan in 1990.
Ai No Kusabi (The Space Between)
ဒီကားလေးကတော့ Abis ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးယဥ်ဂြိုလ်ပေါ်က အာကာသခေတ်ယဥ်ကျေးမှု အပေါ်တည်ထားတဲ့ ဇာတ်အိမ်လေးပါ။
ထိုဂြိုလ်ကို Abis Think Tank လို့
ခေါ်တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကနေ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့ သူတို့နိုင်ငံကြီးကို Tanagura မြို့တော် ၊ Midasမြို့ နဲ့ Ceres ရွာဆိုပြီးခွဲထားပါတယ်။
နိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာလည်း တင်းကျပ်တဲ့ စည်းမျဥ်းတစ်ခု ချမှတ်ထားပါတယ်။ မြို့တော်နဲ့ မြို့မှာ နေတဲ့လူတွေကို နိုင်ငံသားတွေ( လူ) လိုသတ်မှတ်ပြီး Ceres နေတဲ့လူတွေကို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် (သို့) သက်ရှိ sex ကျွန် (Sex Slaves)တွေအဖြစ်သတ်မှတ်ကြတယ်။
တနည်းပြောရရင် လူတွေအတွက် ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေအဖြစ်အသုံးပြုကြတယ်ပေါ့။
***ဒီဇာတ်ကားလေးမှာကတော့ *Iason Mink* ဆိုတဲ့ High Rank
Blondie တစ်ယောက်နဲ့ သူရဲ့ PET လေး Riki တို့ရဲ့ အိပ်ယာထက်က တိုက်ပွဲတွေ ကို ကြည့်ရှူ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။🌚
ဒီ Novelလေးကို Anime Adoration အနေနဲ့ 1992မှာတစ်ကြိမ် 1994မှာတစ်ကြိမ် OVA နှစ်ပိုင်း ထွက်ထားပါတယ်ပြီး 2012မှာတော့ OVA လေးပိုင်းထပ်ထွက်ထားပါတယ်။ ဒီ Novel လေးကို Rieko Yoshihara က ရေးသားထားပီး Volume 6ခုထိ ထွက်ထားပါတယ်။
1900 လောက်က Boy Love တွေကဘယ်လိုမျိူးလဲဆိုတာကိုပါသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Episode 1 ( Degoo ) ( Dubox )
Episode2( Degoo ) ( Dubox )
Previous PostYour NameNext PostYarichin Bitch Club